कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज चैत्र २१ गते बिहिबारको राशिफल ! - PUBLICAAWAJ
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज चैत्र २१ गते बिहिबारको राशिफल !
प्रकाशित : बुधबार, चैत २०, २०७५१६:२० पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
वि.सं. २०७५ साल चैत २१ गते। बिहीबार। इश्वी सन् २०१९ अप्रिल ४ तारिख। शकसंवत् १९४०। विरोधकृत् संवत्सर। उत्तरायण। वसन्त ऋतु। नेपाल संवत् ११३९ चिल्लागा। चैत्र कृष्णपक्ष। तिथि– चतुर्दशी, १२:४२ बजेउप्रान्त औंसी। नक्षत्र– उत्तरभाद्रपदा, २९:३६ बजेउप्रान्त रेवती। योग– ब्रह्म, २२:१७ बजेउप्रान्त ऐन्द्र। करण– शकुनि, १२:४२ बजेदेखि चतुष्पद, २५:२८ बजेउप्रान्त नाग। आनन्दादिमा छत्र योग। चन्द्रराशि– मीन। काठमाडौंमा सूर्योदय– ५:५४ बजे, सूर्यास्त– १८:२२ बजे र दिनमान ३१ घडी १० पला। पञ्चक। भद्रकालीपीठमा लिङ्गो उत्थान गर्ने। दर्शश्राद्ध। निशि बार्ने औंसी।
तपाइँको आजको दिन अनुकुल रहेको छ । स्वस्थ तन-मनले आज सबै कार्य गर्न सक्नु हुनेछ । परिणाम स्वरुप तपाइँमा उत्साह र उर्जा थपिनेछ । लक्ष्मीको कृपा रहनेछ । पारिवारिक सदस्यको साथ आनन्दमा समय बित्नेछ । माताबाट लाभ हुनेछ ।
आजको दिन सावधानीपूर्वक बिताउनु होला । अनेक प्रकारको चिन्ताले तपाइँको मन ग्रस्त हुनेछ । स्वास्थ्य बिग्रनेछ र आँखामा समस्या आउनेछ । परिवारजनको विरोध हुनेछ । आज प्रारम्भ गरिएको सबै कार्य अपूर्ण रहनेछ । फजुल खर्च हुनेछ । दुर्घटनाबाट बच्नु होला ।
आजको दिन तपाइँको लागी निकै लाभप्रद रहेको छ । अविवाहितको लागी योग्य जिवनसाथी मिल्नेछ । धन प्राप्तिको लागी शुभ दिन रहेको छ । मित्रसंगको भेटघाट आनन्दप्रद हुनेछ । उनीहरुबाट लाभ पनि हुन सक्छ । पत्नी एवम् पुत्रको तर्फबाट लाभ हुनेछ । उत्तम भोजन शुख मिल्नेछ । सन्तानको तर्फबाट शुभ समाचार आउनेछ ।
निकै आरामदायक दिन छ । हर कार्य सरलतापूर्वक सम्पन्न हुनेछ । नोकरीमा शिर्ष पदाधिकारीहरु प्रशन्न हुनेछन् । शिर्ष अधिकारीहरुको साथ महत्वपूर्ण विषयमा चर्चा हुनेछ । परिवारजनको साथ पनि मुक्त मनबाट विचार विमर्श हुनेछ । स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ । सरकारबाट लाभ हुनेछ ।
आजको दिन मध्यम फलदायी रहनेछ । निर्धारित कार्य तर्फ ध्यान दिनु होला । धार्मिक एवम् मांगलिक कार्यमा दिन बित्नेछ । धार्मिक यात्राको आयोजना पनि हुन सक्छ । मानसिक अशान्ति छाउनेछ साथै क्रोधित रहनु हुनेछ । सन्तानको तर्फबाट चिन्तित महशुस गर्नु हुनेछ ।
आज कुनै पनि नयाँ कार्यको श्री गणेश नगर्नु होला । स्वास्थ्य प्रति विशेष ध्यान दिनु होला । बाहिर खान-पिन नगर्नु नै उत्तम हुनेछ । आज तपाइँ अधिक क्रोधित रहनु हुनेच्च त्यसैले वाणीमा संयम राख्नु होला । अधिक धन खर्च हुनेछ ।
आजको दिन आनन्द प्रमोदमा बित्नेछ । नयाँ वस्त्रको किनमेल हुनेछ साथै वस्रालंकारको प्रसङ्ग पनि आउनेछ । मानिस बीच मान-सम्मान मिल्नेछ । उत्तम भोजन सुख मिल्नेछ ।
गृहस्थी जिवनमा शान्ती एवम् आनन्दको वातावरण छाउनेछ । शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य पनि सुदृढ हुनेछ । बिरामीको स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ । सहकर्मीको पूर्ण सहयोग मिल्नेछ । धन लाभ हुनेछ । रोकिएका कार्य पूर्ण हुनेछन् । स्त्री मित्रको साथ भेट हुनेछ ।
आजको यात्रा प्रवासलाई स्थगीत गर्नु होला । पेट सम्बन्धी समस्या आउनेछ । सन्तानको स्वास्थ्य सम्बन्धी चिन्ताले मन व्याकुल रहनेछ । कार्य सफलता नमिल्दा निराशा छाउनेछ । प्रिय पात्रको साथ राम्रो समय बित्नेछ । तार्किक एवम् वौद्धिक चर्चाबाट टाढा रहनु होला ।
तपाइँको शारीरिक स्वास्थ्य एवम् मनोदशा राम्रो रहँदैन । परिवारमा झगडाको वातावरणले खिन्नता हुनेछ । शारिरमा उर्जा तथा स्फूर्तिको आभास महशुस हुनेछ । निजि सम्बन्धबाट मनमुटाव हुनेछ । मानसिक उत्साह एवम् प्रतिकुल परिस्थितिमा चिन्तित दिन बित्नेछ ।
मानसिक रुपमा हल्का नहाशुस हुनेछ । मनमा उत्साहको संचार हुनेछ । मित्र एवम् स्वजनको साथ भेट हुनेछ । भाग्यव्रिद्धि हुनेछ । प्रतिस्पर्धीको समक्ष विजय प्राप्त हुनेछ । आनन्दपूर्वक दिन बित्नेछ । छोटो प्रवासको आयोजना हुन सक्छ ।
तपाइँले खर्चमा संयमता अपनाउनु पर्नेछ । साथै क्रोध एवम् वाणीमा संयम अपनाउनु होला । कसैको साथ मनमुटाव हुने सम्भावना छ । शारीरिक एवम् मानसिक स्वास्थ्य मध्यम रहनेछ । नकारात्मन विचारलाई मनमा आउन नदिनु होला । स्वजनको साथ खटपट हुनेछ ।